တရုတ်နိုင်ငံ LA 20% Oxytetracycline ထိုးဆေး ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |Veyong
အသွင်အပြင်-The ဖြေရှင်းချက် အဝါရောင်မှ အညိုဖျော့ ကြည်လင်သော အရည်ဖြစ်ရမည်။
1 ml ကိုLAOxytetracyclineဆေးထိုး20% တွင် Oxytetracycline dihydrate သည် 200 mg base နှင့် ညီမျှသည်။.
Tetracycline ကိုအသုံးပြုခြင်းကို Bronchopneumon ia၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ cholang itis၊ Metrit1s၊ mastitis၊ pyodermia၊ Anthrax၊ ဆုံဆို့နာနှင့် CRD ကဲ့သို့သော စနစ်ကျသော ဒေသဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါများတွင် ညွှန်ပြထားသည်။.
သိုး၊ ဆိတ်နှင့် နွားများအတွက် တိကျသောညွှန်ပြချက်များမှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ရင်သားရောင်ခြင်း၊ metrit1s၊ chlamyd iosis နှင့် မျက်ကြည်လွှာ ပိုးဝင်ခြင်း၊njunctiva နှင့်wရောဂါကူးစက်မှု
ကြက်များအတွက် သီးခြားလက္ခဏာများမှာ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (CRD) Colibacillosis နှင့် ငှက်ကာလဝမ်း၊
ဆေးပမာဏနှင့် စီမံကွပ်ကဲမှု ပမာဏနှင့် အသုံးပြုမှု
ယေဘူယျအားဖြင့် ဆေးပမာဏ- 10-20mg/kg ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၊ နေ့စဉ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသူ- 0.5ml/10kg၊ တိရစ္ဆာန်ငယ် 1ml/10kg နွား၊ ကုလားအုတ်၊ သိုး၊ ဆိတ်- ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် 20 mg oxytetracycline တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် 1 ml ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် 10 kg လျှင် 1 ml၊
တက်ထရာဆိုက်ကလင်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို မကြာခဏ သတိပြုမိလေ့မရှိပါ။
tetracycline ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဆိုးရွားသော သက်ရောက်မှုများမှာ- ဓာတ်မတည့်မှု တုံ့ပြန်မှု၊ ဓါတ်ရောင်ခြည် မခံနိုင်မှု၊ ငယ်ရွယ်သော အရွယ်တွင် သွားများ အရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့် အသည်းအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ oxytetracycline သည် နေရာ၌ တစ်သျှူးများ ယားယံခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။jလုပ်ဆောင်ချက်
Tetracycline အသုံးပြုခြင်းအတွက် ဆန့်ကျင်ညွှန်ပြချက်မှာ ပြင်းထန်သော အသည်း သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့် tetracycline တွင် ရံဖန်ရံခါ အာရုံမခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်
Tetracycline ကို penicill1nes၊ cephalosporins ကဲ့သို့သော ဘက်တီးရီးယားသတ်ဆေး ပဋိဇီဝဆေးများနှင့် ပေါင်းစပ်မထားသင့်ပါ။tetracycline ၏စုပ်ယူမှုသည်တားမြစ်သည်။divalent cations ပါရှိသော ပြင်ဆင်မှုများနှင့် တပြိုင်နက် ပေးသောအခါတွင် တီးမှုတ်ပေးသည်။tetracycline ၏ macrolides ဖြစ်သည့် tylosin နှင့် colistin ကဲ့သို့သော polymyxins ကဲ့သို့သော macrolides နှင့် ပေါင်းစပ်၍ ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်သည်၊
အသားများ : 21 ရက်
နို့၊ ဥ 07 ရက်
25 ℃ အောက်တွင် သိမ်းဆည်းထားပါ၊ အလင်းရောင်မှ ကာကွယ်ပါ။ကလေးများ လက်လှမ်းမမီအောင်ထားပါ။အမှုန်အမွှား သို့မဟုတ် မည်းသွားပါက မသုံးပါနှင့်။ဆေးအသုံးမပြုမီ သင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
ယခင်- 1% Eprinomectin ထိုးဆေး
နောက်တစ်ခု: 10% Enrofloxacin ခံတွင်းဖြေရှင်းချက်
4% Gentamyclin ဆာလ်ဖိတ် ထိုးဆေး
15% Amoxicillin ထိုးဆေး
33.3% Sulfadimidine ဆိုဒီယမ် ထိုးဆေး
5% Oxytetracycline ထိုးဆေး
10% Oxytetracycline ထိုးဆေး